Akụkọ - chunky akpụkpọ ụkwụ ikiri ụkwụ dị elu
Akpụkpọ ụkwụ dị elu
n'etiti nwa ehi
na -agba ume
Ntupu & ajị anụ
Ndị na -emepụta ika
kpochapụwo & stiletto
ngọngọ & chunky
Ọrụ dịịrị ụlọ ọrụ
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị ụlọ elu Xinzirain na -abịa!
Oge erugo ime ihe dị iche na oge ọkọchị nke 2021, nwalee ihe ọhụrụ site n'ọdịdị gị na nhọrọ akpụkpọ ụkwụ gị. N'ezie, anyị chọkwara ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị dabara adaba ma dị mma. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị Xinzirain dị elu maka ndị enyi ezumike na -abịa. Ka anyị leba anya na ndị mbata ọhụrụ a: Mepee akpụkpọ ụkwụ Rhinestone transperent Strip Chunky Square n'ikiri ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Mepee akpụkpọ ụkwụ Rhinestone transperent Strip Chunky Square n'ikiri ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Mkpịsị ụkwụ dị obosara mepere emepe na -aga n'ihu n'ụdị na -ewu ewu na nke bara uru nke ikiri ụkwụ dị elu. Ejiri ikiri ụkwụ dị warara na rhinestone na -enwu ha, iji tinye ụdị ọmarịcha na uwe ejiji. Mgbe ị yichara ihe pụrụ iche ahaziri iche, nwee mmetụta ụwa nke enweghị atụ.
Akpụkpọ ụkwụ nwere ụkwụ ikiri ụkwụ bụ ihe na-aga n'ihu n'ụdị akpụkpọ ụkwụ chunky dị elu, nwere ezigbo ọmarịcha ụkwụ ụmụ nwanyị, a na-anabata akara ngosi akpụkpọ ụkwụ maka ndị ahịa, yana eriri rhinestone na-enwu gbaa n'ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị mara mma, dị mma nke ukwuu. eyi.
Iji mepụta akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị mara mma, yana ụdị ejiji na ụdị kpochapụwo, ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ, ịhọrọ udiri akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ iji mepụta akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị nwere ọkwa dị elu, nwere akwa mkpuchi dị mma, ụzọ ọhụrụ na ụdị dị mfe.
na ọnụ ahịa dị ọnụ ala iji sọrịta mpi na ịdị mma na mma. iji nye ejiji na ịdị mma na ọnụahịa kachasị mma, na -achọ inye ndị ahịa anyị akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị kacha mma.
akpụkpọ ụkwụ rhinestone chunky dị elu
A na -ahụkarị ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu, na -eme ka ọ dị mma. Ọnọdụ okpomọkụ dị ugbu a na -adịkarị elu karịa ma ọlị.
akpụkpọ ụkwụ ikiri ụkwụ dị warara
Oge ezipụ: Jun-23-2021
Okwu: Mba. 369, Okporo ụzọ, Jiaolong Port, Shuangliu District, Chengdu City, Sichuan, China
Anụ ọhịa bea